Universal Tv Live - Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo ku geeriyooday d...
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo ku geeriyooday dalka KenyaWararka naga soo gaaraya dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in saakay dalkaasi uu ku geeriyooday Xildhibaan Cabdul qaadir Faarax Bootaan oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Puntland .
Xildhibaan Cabdulqaadir Faarax Bootan ayaa waxaa xaalad Caafimaad loogu qaday dalka dibadiisa kadib markii dhaawac Culus uu ka soo gaaray Qarax loogu xiray gaari uu watay xili uu ku sugnaa gudaha magaalada Gaalkacayo.
Qaraxa Xildhibaanka lagu dhaawacay ayaa dhacay sagaalkii Bishan aan iminka ku jirno, wixii xilligaasi ka dambeeyay dalka Kenya ayaa lagu daaweynaayay Xildhibaanka.
Geerida Xildhibaanka ayaa waxaa xaqiijiyay Xildhibaan Xuseen Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada Baarlamnka Puntland.
Guddoonka Baarlamaanka Puntland ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid Xildhibaankaasi ka tirsan Baarlamaanka Puntland.NextRaiisal Wasaaraha oo Galmudug ka dalb...PreviousMahad Cabdalla Cawad: Waa in Xukuumad...Comments